Yintoni ingxaki yeNitrogen, kutheni amafama ekhalaza kwaye kutheni kuncitshiswa isantya? : UMartin Vrijland
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	7 Novemba 2019	• 12 Comments
Kubonakala ngathi sisibetho sokwenene! Bonke amafama ngequbuliso kufuneka anciphise i-nitrogen. Elo gama 'initrogen' sele linalo igama elisisiseko 'ngokwanele' kwaye loo nto yenza ukuba umntu ophakathi kwesitrato acinge ukuba sijongana nento ethile esiya kuthi siyirhole. Ngokufanelekileyo abaninzi bakudibanisa igama kunye ne-CO2 kwaye umahluko awaziwa. I-nitrogen sisiseko esisiseko sendalo. Ibinzana elithi 'nitrogen' ke libhekisa kwi-atom enokuthi ivele kwindalo iphela (njengemolekyuli). Kungenxa yoko le nto, njengomlimi, awukwazi ukunciphisa i-nitrogen. Unako, umzekelo, ukunciphisa i-ammonia. I-Ammonia NH₃ inokulungelelaniswa kwaye ifunyanwa, umzekelo, ekugayeni kweenkomo. Ukuba urhulumente ufuna ukwenza ukuncitshiswa kwe-nitrogen ngokucacileyo sisigqibo se-NLP (Neuro Linguistic Programming) ukukhetha ukudlala abantu abakwinqanaba elincinci. Ukuncitshiswa kweNitrogen ngokwenyani akuthethi nto konke konke. Unciphisa ntoni irhasi yeNitrogen, iAmmonia of enye yezinto ezininzi Yenzeka phi initrogen?
Kusenokwenzeka ukuba uyazi i-nitrojeni efanelekileyo ukusuka kwinto ephantsi koxinzelelo oluphezulu kwibhotile kwaye kufuneka uyiphalaze ngegloves ezinobunzima (okanye njengakwiifoto ukusuka kwibhotile efakwe insulin), kuba ngaphandle koko iminwe yakho iya kukhulula: i-nitrogen gesi (N2). Oku kusetyenziswa njengomzekelo ukususa warts. Nje ukuba i-naitrogeni iphume kwibhotile enegesi eninzi, iqala ukubila kwaye ikhuphe. Inobushushu obushushu be--195,8 ° C kwaye bubushushu apho initrogen ilwelo khona. Irhasi yeNitrogen iyabanda kakhulu kwaye ngoko nangoko iqale ikhuphe umoya ovulekileyo. Ukuyigcina iphantsi koxinzelelo oluphezulu kwiibhotile zensimbi eziqinileyo kuyenza inyibilike. Lowo ngumthetho wenyama.
Sele sisazi ukuba kufuneka sinciphise i-CO2. I-CO2 ayinanto yakwenza nerhasi yeNitrogen (N2). I-CO2 ithetha ikharbon diokside. Ke elo gama lakhiwe ngolu hlobo: di-oxide imele i-oxygen ye-2x. I-atom yekharbon eneeathom ezimbini zeoksijini eziqhotyoshelwe kuyo. Ikharbon diokside iveliswa ngumbane ovuthayo oqukethe iatom zekhabhoni. I-petroli, iparafini kunye nedizili zonke zineeathom zekhabhoni. Iimolekyuli yeoyile ke yenziwa, phakathi kwezinye izinto, iiatom zekhabhoni kwaye, xa itshiswa emoyeni (ioksijini, ukuba yi-O2 igesi), CO2 idalwe ngokudalwa okugcweleyo kunye ne-carbon monoxide (CO) inokuvela ngokungaphelelanga. Ezi zinto ngamanye amaxesha zenzeka kubushushu begesi ekhayeni, kubangela ukuqhuqhumba. Apho unokubona ikhonkco elingaphantsi kwe-nitrogen kunye ne-CO2. Ngokwechwephesha nakwilizwe lokwenyani, bobabini abananto yakwenza nomnye.
Ukuba amafama kufuneka anciphise i-nitrogen, kufuneka anciphise into engacacanga ngokupheleleyo. Oku kungenxa yokuba amafama akavelisi i-nitrogen gesi. Irhasi yeNitrogen yeyona gesi ixhaphakileyo kwaye yenza i-78,1% yexabiso elipheleleyo lomoya. Qaphela ukuba iatom inokufumaneka kwindalo kuphela ngokunxulumene nezinye iatom. Kanye njengeatom yeoksijini (O) kuphela ukuba, umzekelo, ioksijini yeoksijini (O2) okanye emanzini kwenzeka (H2O). Initrogen idityaniswa rhoqo phakathi komoya nezinto eziphilayo. I-nitrogen kufuneka icocwe kuqala okanye "ilungiswe" kwifom enokusetyenziselwa isityalo, iammonia. IAmmonia yinto eveliswa ngabalimi (ubuncinci beenkomo zabo). I-Ammonia iluncedo kwaye iluncedo kwizityalo, yiyo loo nto abalimi besasaza isichumiso emhlabeni wabo.
Xa i-ammonia ifakwe zizityalo, isetyenziselwa ukudibanisa iiproteni. Ezi zityalo ke zidityaniswa zizilwanyana ezisebenzisa iikhompawundi zenitrogen ukudibanisa iiprotein zazo kunye nenkunkuma ene-nitrogen equlathe (ammonia). Okokugqibela, ezi zinto ziyafa zize zibole, ziphantsi kwebhaktiriya kunye nokusingqongileyo oxidation kunye ne-denitrification, zikhuphe igesi yeNitrogen (N2) yamahhala emoyeni. Umjikelezo omangalisayo onomdla kunye ofanelekileyo.
Njenge CO2, akukho nto inetyhefu okanye iyingozi malunga negesi yeitrogen. Ngapha koko, i-nitrogen gesi yirhasi 'ye-inert' ethi ngokwemvelo inganikezeli ekuphenduleni kwemichiza nezinye izinto. Ayinabungozi, ayisiyongo, ayinachaphaza kwaye siyiphefumla imini yonke; nje ngeoksijini. Le oksijini eveliswa kwakhona yimithi ngenxa yokufakwa kwe-CO2. Zombini i-CO2 kunye negesi ye-nitrogen ke zigesi ezilungileyo kwaye zilungile, kunye nezopolitiko ngoku (kunye namaqela ezopolitiko) zithi ziyingozi. Kungenxa yokuba oorhulumente kwilizwe jikelele baye bajongela phantsi oosonzululwazi ukuba baliqinisekise eli bali, ngelixa kungekho themba libi, ikhemikhali okanye inkcazo ngokomzimba elinokunikwa. Iingxelo ezingabonisa ukuba bekukho i-CO2 engaphezulu emoyeni ngexesha lokufudumala emhlabeni, bonisa ukuba i-CO2 sisiphumo somsebenzi welanga kwaye ayingonobangela. Singamangqina omlingo wesayensi yokwazisa ngenkqubo yerhafu yehlabathi kunye nenkqubo apho iindleko zomntu wonke zingalandeleka (imali ye-blockchain).
Ukusukela kwi-2015, amafama abanjelwe kwi-PAS (Nitrogen Approach Programme). Sibona uqhanqalazo kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo ngenxa yokufakwa kweemfuno ekunzima okanye ekungenakwenzeka ukuzisebenzisa, ezikhokelela kubalimi ababhanga. Into yokuba uMark Rutte uchithe usuku izolo emamele amafama (athetha uboya kwaye angenzi kwanto) imalunga nokukhutshelwa kwerhasi yeGroningen kunye neenyikima ezisiphumo: Yonke imihla emva koko nezopolitiko ziyandwendwela into ebambeleyo. kwaye abantu mababethe ngomphunga. URutte angaya kwintlanganiso yamafama enjalo ngokuzithemba, esazi ukuba ilizwe laseDatshi lityale imali iminyaka kwinethiwekhi i-pawns kuwo wonke umsebenzi; uthungelwano lwe-Inoffizieller Mitarbeiter njengolawulo lweqela eliphikisayo kulo lonke uluhlu loluntu. Njengomdlali weqonga onokuzibiza ngokuba 'yinkulumbuso', akufuneki oyike ukubahlaselwa okwenyani, kuba amafama azakusinda kulo lonke usizi mhlawumbi aphakathi kweli qela kwaye baya kuthi cwaka.
Ngenxa yokuba awukwazi ukukala ukukhutshwa kwe-nitrogen, ukuba awunangcaciso icacileyo yeyokuba ngubani na okhupha i-nitrogen, unengxaki. Umzekelo, ngaba inkomo ikhupha igesi yenitrogen xa isiya kude? Hayi, kukho i-nitrogen eyingqini kumchamo kunye nakwi-poo, kodwa inkomo ayizikhuphe igesi yeNitrogen. Irhasi yeNitrogen ngamanye amaxesha isetyenziswa ngabalimi, umzekelo ukunqanda ukukhula kwengca okanye ukugcina iziqhamo, kodwa oko akuthethi kuninzi kwaye ngaphezulu koko ngaphezulu, i-nitrogen gesi ayinabungozi kunye nerhasi elungileyo. Amafama ke kufuneka afumane isixhobo sokubala, apho urhulumente azimiseleyo ukwenza ukungcola kwenitrogen. Ekugqibeleni kuvela ukuba malunga iAmmonia kwaye ngenxa yoko yintoni kumgquba kunye nomchamo. Iitrogen ihlala iligama elikhethwe ngenxa yezizathu zokusasaza nenkqubo yangaphantsi "ukuba uyanyanzelaMsgstr ". Kutheni kungenjalo? Ungcoliseko lwe-ammonia okhankanyiweyo kwaye ngaba sihlala sisiva igama elisikhumbuza ukuba sine-ntsholongwane? Njengoko kucacisiwe: yile nto siyibiza ngokuba yi 'subliminal programming'.
Izicwangciso zamva nje kombutho wabadlali I-Hague yeyokuba isantya esiphezulu ezindleleni kufuneka sincitshiswe. Kwaye ke kukho enye into malunga nokwakha? Ngaba usayifumana? Kuyabonakala ukuba kufanele ukuba babe bambalwa abalimi, kuba sifuna ukukwazi ukwakha amakhaya amaninzi kunye nezibonelelo, kwaye isantya ezindleleni kufuneka sincitshiswe, kuba urhulumente unokuchitha amawaka ezigidi ukongeza kwezohlwayo zendlela. Yonke ingcinga ayilahleki kuyo yonke ingxoxo kwaye ibonakala iyinjongo. Kukho into ephoswa kuphela ngemibandela engachukumisi nantoni na kunemvakalelo yesisu (kodwa sithe saya elunxwemeni). Ayisekho malunga nomxholo kunye nomxholo; Yonke into esehlabathini yeendaba, yezopolitiko kunye neyokusingqongileyo imalunga iimvakalelo zesisu. Okwangoku, kunesiphumo esinye kwaye oko kukuthi wonke umntu kufuneka afake imali eninzi kuyo okanye ngokulula (njengabalimi) uya kubhengezwa.
Shell, uyazi ukuba inkampani apho usapho lwethu lwasebukhosini lunesabelo esibalulekileyo (efihliweyo emva kwazo zonke iintlobo zolwakhiwo oluhle) kuqalile kwi-2009 nitrogen nitrogen kwi ukongeza ipetroli. Oko kuya kukwenza ukucoca iinjini ndicoceke. Ngapha koko, okuchaseneyo kubonakala ngathi kunjalo kwaye singatsho ukuba ingxaki yongezelwe ipetroli ziinkampani zeoyile. Ingxaki urhulumente waseRutte azama ngayo ukuza nesisombululo ngokunciphisa isantya esiphezulu ukusuka kwi130 ukuya kwi100 kwiindlela zeenqwelo. UAndré L. Boehman (ngoku oza kuba yinjubaqa), unjingalwazi wesayensi yamafutha, isayensi yezixhobo kunye nobunjineli kwiPenn State University eNew York, sele enike ingxelo kwi2009 kwiNew York Times:
I-nitrogen eyityebileyo i-nitrogen yenziwe 'okwethutyana'. Watsho ukuba igama elithi "nitrogen eyityetyisiweyo" alitsho kwanto kumntu ophakathi ongazaziyo iikhemistri zezongezo. Into endizibuza yona njengengcali yamafutha yile: "Kutheni besongeza i-nitrogen engaphezulu, kuba loo nto iya kwandisa ngokubanzi ukukhutshwa kwe-NOx?"
Ukongezwa kwecomputer ezine-nitrogen ezinento yokwenza ipetroli ipetroli kungoko kunobangela. Isisombululo ke kufuneka sifumaneke apho: kunye nabo bahambisa ipetroli; Uyazi ukuba iibhiliyoni zeedola ziqhutywa lusapho oluhlala ezindlwini zesikolo kwaye esihlawula irhafu kukuzikhohlisa okubizwa ngokuba yintando yesininzi. Susa ngokulula izongezelelo ze-nitrogen!
Yonke imilinganiselo ebonakalayo ngoku ukuba sibona abantu bebhabha bayijikeleza icocekile kwaye isekelezelwe kuphela ekusasazeni ubuchopho obuxhaswa ziingcali eziqeshiweyo nguJeroben Pauw kunye nezinye iinkqubo zokulawulwa kweTV. Akukho ukugxekwa okuqinisekileyo okanye isiseko esomeleleyo sesayensi. Kwaye ukuba kukho ukugxekwa, ubalo-mali luya kuqinisekisa ukuba abantu abaluboni. Yinto malunga nokuziva gut, inkqubo engaphantsi, kunye nabadlali abahlawulelweyo bakubeka eboyeni ngesiphu. Ngokoluvo lwam, imfuno ye-naitrojen kumafama ijikeleza umhlaba, apho urhulumente afuna ukwenza kube nzima kumafama. Kunzima kangangokuba abanye baye babhanga kwaye abamelwane babo beefama banokuthatha umhlaba kwaye umhlaba uphela ungaya kurhulumente ukulungiselela iiprojekthi zokwakha nezakhiwo. Into yokuba isantya esisezantsi isezantsi kuya kuba nesiphumo sokudlulela kwezigidi zezigidi zeedola (ezivela kunesohlwayo), apho ezo zakhiwo zintsha kunye neeprojekthi zokwakha zinokuxhaswa ngemali. Ukuba abalimi abambalwa bangena ebhotileni, imeko iya kuba yintlekisa. Aba balimi banokuvana kamnandi njengabakhonzi kunye nabamelwane babo. Ayisiyo yonke imo engqongileyo; Konke malunga nemali kunye nemigaqo engaphezulu (funda: ulawulo olungakumbi, urhulumente wamapolisa ngakumbi). INetherlands njengendawo yokuvavanya yonke iYurophu kunye nehlabathi liphela.
Funda qhubeka apha
Uludwe lwekhonkco lovimba: nytimes.com
Abafundi bokubonakalisa isimo sezulu IHague iyafakazela ngokwaneleyo
tags: 100%, 130, Indlela, iAmmonia, amafama, CO2, eziziimbalasane, eliphezulu, Dutch, PAS, inkqubo, mbhikisho, isantya, iindlela ezinkulu, nitrogen
Matthijs van den Brink wabhala wathi:
7 Novemba 2019 kwi-14: 13
"Intlanzi ikhule kakuhle kwaye imfusa," batsho abalimi, ke akunakwenzeka ukuba (ngokubonakalayo) ibe ninzi initrogen. Yintoni ebonisa ukuba kunokubakho ne-nitrogen eninzi kakhulu. Okanye ngaba oku kungenxa ye-acidization yomhlaba ngenxa ye-ammonia eninzi? Kwaye ayisiyitrojeni engako? Kodwa ke nokusasazeka rhoqo komgquba akulunganga. Ngaba awunayo inqaku (nokuba igama elithi nitrogen alichanekanga)?
7 Novemba 2019 kwi-14: 23
I-Amoniya ngokwayo ayisi-acidic, kodwa isisiseko; Ewe, iyayichaphazela i-acid.
Igama elithi nitrogen liyacaciswa kwinqaku kwaye alinanto yakwenza noko iinkomo zinakho kwimizimba yazo ngaphandle kwento ethi initrogen yinxalenye ye-ammonia. I-Ammonia iluncedo kwaye ilungile kwizityalo.
Ewe ungatsho ukuba yonke into ethi 'kakhulu' ayilunganga, kodwa i-ajenda yezopolitiko ibonakala ikakhulu iphathelele imali kunye nobunini bomhlaba (okanye ukuyithatha), kwezi mfuno zezendalo njenge-alibi
7 Novemba 2019 kwi-14: 31
Ibali kukuba i-Netherlands ineenkomo ezininzi kwaye ngenxa yoko inomgquba omninzi kunye nokukhutshwa kwe-ammonia. Ukuba oku kuzinze emhlabeni ke izityalo ezithanda umhlaba omdaka- kwaye zingenako ukuqhubekisa initrogen eninzi - zihlupheka kuwo. Izityalo ezikhula emhlabeni omninzi weNitrogen, njengotshani kunye namarhamba, zifumana isandla esiphezulu.
Leyo yinto esemthethweni ... kukhumbuza u "asidi wemvula" hype kwiminyaka embalwa eyadlulayo. "Izityalo ezithanda umhlaba omdaka ...", "izityalo ezisengozini" .. ewe ewe .. Siphinde sibone igama elithi initrogen kunye nenitrojeni eninzi. Igama elithi nitrogen lihlala lingalunganga. I-nitrojeni yenzeka kuphela kumxube njengoko kuchaziwe kumfanekiso kwinqaku.
Ndithi: konke malunga nemali, imigaqo engaphezulu kunye nokubanjwa komhlaba
7 Novemba 2019 kwi-15: 26
Ke ukufundwa okusemthethweni kukuba i-ammonia iya kuba yinto embi kwezinye izityalo kwiindawo ezithile zokuhlala.
Kuya kuba ngokungathandabuzekiyo ukuba okuninzi akulunganga, kodwa konke kubonakala kufana nokutshatyalaliswa kokutsalwa kwezilwanyana eNetherlands. Imo engqongileyo njenge-alibi yokufumana imali ngakumbi kubemi.
Yonke isenokuba yinto encinci, kodwa kubonakala ngathi imalunga nokungeniswa kunye neenkqubo zokulawula ubungangamsha kunye nemali.
Siphinde sabona indlela eyaziwayo 'yenzululwazi ephikisana nentetho esemthethweni ifumana inyuselo kunye nabanye abagcina ibali lifumana ukunyuswa' kwibali le-CO2. Umbuzo kukuba kunjalo na apha.
7 Novemba 2019 kwi-15: 52
Ukwenza ukuba kuncitshiswe ukukhutshwa kwe-ammoina linyathelo elincinci ekunciphiseni ukusetyenziswa kwenyama. Ujonga njani ukuba ingakanani inyama ethengwayo kwaye ityiwe ngabantu? Via 'i-intanethi yezinto' (i-5G) kunye nokusetyenziswa okungalandeleka. Oko kufuna i-blockchain esekwe kwinkqubo yemali kunye nezinto ezifana nee-smart metres endlwini (ifriji yokulinganisa oko kungena, indlu yangasese entle yokulinganisa okuphumayo).
I- "nitrogen" alibi, kunye ne-CO2 hype, ke yeyona ndlela ilungileyo yokwazisa iinkqubo zolawulo lobuzwilakhe.
7 Novemba 2019 kwi-19: 34
Kwaye ukuba umlimi emva koko uza nezisombululo, ke oko kufanelekile ukuba kuyekwe, kuba akuhambelani ne-ajenda ye-2030 yehlabathi. Ukuthintela inkululeko kunye nokungena kumasimi njengekhoboka ..
7 Novemba 2019 kwi-20: 04
Isisombululo esihle. Ndikhe ndaqala ishishini lokuthengisa i-zeolites kwaye ndingowokuqala ukuzisa izinto eYurophu ezivela ezimayini ezivela eTurkey naseOstreliya. Ngelishwa, ngexesha elithile umthengi omkhulu akazange ahlawule amatyala, ngenxa yoko andinakuyisindisa inkampani. Umnini omtsha uthengise ukungabinamali unazo zonke izicatshulwa ezibhalwe ndim ngelo xesha usekwiwebhusayithi. Okuhle ngoku sisigidi kwaye wandibulela ngawo wonke umsebenzi ngomnxeba.
I-Zeolite, ngakumbi i-Clinoptilolite, amacebo okucoca i-ammonia kwizixhobo zokuphalaza kwaye iphinda iphinde isebenze kwakhona ngombha wetyuwa. I-Clinoptilolite endiyibonisileyo iye yamkelwa yi-EU njengesongezelelo sokutya. Ndingowokuqala ukuhambisa oku kwiifama zamahashe kunye nezindlu ezinkulu zeenkukhu.
Esinye isisombululo esisebenzayo. Kodwa abantu abafuni zisombululo, bafuna ukwahlukana nomzi mveliso kwaye babambe ngakumbi.
7 Novemba 2019 kwi-23: 07
UMartin ingcaciso yakho ichaza okuninzi, yonke into eMadurodam nakwindawo ezikujikelezileyo iphantsi kolawulo lwe-luciferian.
7 Novemba 2019 kwi-21: 14
Qaphela kwakhona ukuba i-boom yaqala "ngokulawula i-nitrogen" ukusuka kwibhunga likarhulumente.
Iklabhu ekhutshwa nguWillen-Alexander.
Kucace gca ukuba kweliphi icala lokuvela.
8 Novemba 2019 kwi-12: 17
Yonke into, ngakumbi izinto ezibalulekileyo kumakhwenkwe kwisikripthi, zijolise kwimfezeko. Ngenxa yoko akukho ngqiqweni ukuya ezinkundleni 'zenkundla' zabo.
Andiqondi ukuba amafama, ilizwe lokwakha, njl njl. Ayisebenzi kunye? Umngcipheko uhlala kukuba imibutho efuna into enzulu, enzulu, ityhilwe ngabantu abaphantsi abaninzi. Iliphi ilizwe. Ngethamsanqa siphila 'kumthetho womthetho'.
7 Novemba 2019 kwi-23: 31
Kwaye elona phephandaba likhulu eNetherlands lisenokuqalisa ukwenza ulawulo lomonakalo, ngoku sele icacile (kuba ukulinganisa kuyazi, idatha enkulu) ukuba abantu abayithathi.
(simahla ukuba sifunde ngohlobo lwe-Incognito, kodwa kungcono ungayiboni loo ngqondo)
Abantu bahlala bethetha nge-nitrogen, kodwa ayithethi nge-nitrogen. Ligama elisasazekayo eli, ukunika umbono wokuba uyagezela!
17 Novemba 2019 kwi-14: 05
« Igqwetha likaShot uPhilippe Schol kunye nengxelo yobuqhophololo bobuxoki uSchiphol
Ungabanyanzela njani oorhulumente ukuba batshintshe ngelixa ungabanaki abantu? »
Iindwendwe ezipheleleyo: 14.002.234
Utatomkhulu ka-Greta Thunberg uye wavela waba ngumvelisi wegalelo lokugcina ukushisa kunye nokuncitshiswa kwenani labantu kwi-eugenics
I-UN manifesto '90 ibonisa: imozulu yemozulu eyenzelwe ukuphumeza urhulumente wehlabathi
Isimo samapolisa sibi ngakumbi kunaseJamani yamaNazi esidlula njengengcuka enxibe impahla yegusha kwaye awuyiboni
URobert Jensen "UDonald Trump akakholelwa kwi-New World Order" uqinisekisa: IJensen.nl ilawulwa ngokuchaseneyo
Sele luqalile uhlaselo? I-Psycholance yayisele inikezwe ukukhanya okuluhlaza kwi-2018 esekwe kwimeko ye-Els Borst / Bart van U.
Kutheni ufuna ukwazi oku? op Isimo samapolisa sibi ngakumbi kunaseJamani yamaNazi esidlula njengengcuka enxibe impahla yegusha kwaye awuyiboni
ben op I-UN manifesto '90 ibonisa: imozulu yemozulu eyenzelwe ukuphumeza urhulumente wehlabathi
UMartin Vrijland op Utatomkhulu ka-Greta Thunberg uye wavela waba ngumvelisi wegalelo lokugcina ukushisa kunye nokuncitshiswa kwenani labantu kwi-eugenics
SandinG op Utatomkhulu ka-Greta Thunberg uye wavela waba ngumvelisi wegalelo lokugcina ukushisa kunye nokuncitshiswa kwenani labantu kwi-eugenics
SalmonInClick op Utatomkhulu ka-Greta Thunberg uye wavela waba ngumvelisi wegalelo lokugcina ukushisa kunye nokuncitshiswa kwenani labantu kwi-eugenics
Joyina amanye ama-1.684 ababhalisile